प्रकाशन मिती: २०७८ बैशाख १७ गते
म सानो छँदा नै बुबा भन्नुहुन्थ्यो, कथा कथ्य नौला उहाँ भन्नुहुन्थ्यो । म सुन्थेँ कथा ती कुनामा बसेर र गुन्थेँ कथा ती कुनामै पसेर । कथा लेख् न कान्छा कथा पढ् न कान्छा, कथा नै सुनी आज बोल्नू नि कान्छा । कथामा पुराना सबै बात हुन्छन्, कथामा नयाँ झन् अलंकार हुन्छन् ।
पुराणादि जम्मै कथामा उनिन्छन् र वेदादि जम्मै कथामा बुनिन्छन् । कथा जन्मका मृत्युका सार हुन्छन्, कथा विष्णुका झन् सुनी पार हुन्छन् । कथा लेख्न सक्ने कथाकार हुन्छन्, कथा बोल्न जान्ने कलाकार हुन्छन् । कथा बोक्छ संस्कार आस्था सबैका, कथा बोक्छ संसार सारा कहन्छन् ।
कथा बाँच्छ धेरै कथाकार भन्दा, कथा बोल्छ धेरै कलाकार भन्दा । भनी भन्नुहुन्थ्यो पढेस् भन्नुहुन्थ्यो, सुनेस् टन्न धेरै सधैँ भन्नुहुन्थ्यो । म सुन्थेँ कथा दैत्यका दुष्ट पापी, म सुन्थेँ कथा कृष्णका शुद्ध जाती । म सुन्थेँ कथा रोगका औषधीका, बुबा भन्नुहुन्थ्यो कथा भाँति भाँति ।
कथा प्रेमको घातको आनिबानी, कथा जिन्दगीको अनौठो कहानी । कथा फाल्छ सत्ता नराम्रो निशानी, कथा ल्याउँनेछन् सुनौला बिहानी । कथा दिन्छ आरोग्य दीर्घायु दिन्छ, कथा शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य दिन्छ । कथामा कतै हुन्छ यो राजनीति, कथामै कतै मन्त्रको वीज हुन्छ । कथा भोग्छ मान्छे कथा भुक्तभोगी, कथा रम्छ एक्लै कथा शुद्ध योगि । कथा सुन्न चाँडो छिटो गर्न पर्छ, कथा फुत्त अन्तै कतै सर्न सक्छ ।
कथा लेख्न बिर्सेर के गर्नु आज, तँ लेख् लेख् कथा लेख् सुधारेस् समाज । भनी भन्नुहुन्थ्यो बुबा भन्नुहुन्थ्यो, कथाले सुधार्ने छ हाम्रै समाज । म सुन्थेँ कथा मात्र बुझ्दै नबुझ्ने, लगाऊँ सबै बुद्धि सुझ्दै नसुझ्ने । कथा एक नौलो कतै सर्न सक्छ ? भनी सोच्दथेँ झन्, कथा मर्न सक्छ ?
जसै वर्ष बित्दै थिए फ्याट्ट फेरी, उही काल आयो र टेर्दै नटेरी । लगी गैगयो मृत्यु को सार्न सक्छ, भयो भैगयो काल को टार्न सक्छ । उही मृत्युमा नै कथा सिद्दिए ती, उही मृत्युमा नै कथा रित्तिए ती । बुबाकै उही वाक्य भन्दै छु आज, कथा काब्य लेखी सुधारौँ समाज ।